သူမ ရဲ့ ဂေဟာလေး အောက်လမ်းနည်း နဲ့ တိုက်ခိုက်တာ ခံနေရကြောင်း ဖွင့်ပြော လာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ – Let Pan Daily
သူမ ရဲ့ ဂေဟာလေး အောက်လမ်းနည်း နဲ့ တိုက်ခိုက်တာ ခံနေရကြောင်း ဖွင့်ပြော လာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ပရဟိတမင်းသမီးလေးလို့ တင်စားရလောက်အောင် ကိုယ်ကျိုးမဖက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ စွမ်းစွမ်းတမံလိုက်လံကူညီတတ်သူ မင်းသမီးလေး ခိုင်နှင်းဝေဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရောက်လာတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေကိုလည်း သူမရဲ့ ဂေဟာလေးမှာ ခေါ်ယူမွေးစားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သားသမီးလေးတွေ ရဲ့ မိခင်အဖြစ် ပြုစုပျိုးထောင်နေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေဟာ သူမရဲ့ ဂေဟာလေးကို အောက်လမ်းနည်းနဲ့ တိုက်ခိုက်နေသူတွေကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရပါတယ်။
ဒီလိုအတိုက်အခိုက်တွေရှိနေကြောင်းကိုလည်း ကျိုက်မရော ဆရာတော်ကြီးထံသွားရောက်ဖူးမြော်ရင်း သိခဲ့ရတယ်လို့ ခိုင်နှင်းဝေက ဆိုပါတယ်။
မနေ့က ကျိုက်မရောဆရာတော်ကြီး ထံသို့ သွားရောက်ဖူး မျှော်ရင်း ဂေဟာ မှာ အတိုက်အခိုက် အတားအဆီးအနှောက်အယှက်တွေ ရှိနေတယ်လို့ ဆရာတော်ကြီးက မိန့်ကြားပြီး ဂေဟာကိုလာစစ်ပေးဖို့ ဒီနေ့ပဲ ဆရာတော်ကျောင်းက အဘ တယောက်ကို ပင့်ဖိတ်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်တော့ အဘက အာရုံပြုကြည့်လိုက်တာ နဲ့ ဂေဟာရှေ့က ရွက်လှပင်အောက်မှာ ရှိတယ်လို့ မိန့်တော့ ကျမတို့ ချက်ချင်း ဆယ်ယူကြည့်တဲ့အခါ တကယ်ပဲ အင်းပြားတွေ တွေ့လိုက်ပါတယ်ရှင် အဲဒီအင်းပြားက လူသေကောင်တွေမှာပတ်တဲ့အဝတ်စ.ပိတ်ဖြူနဲ့လုပ်ထားတာတဲ့ 😭
ကျမ ကလေးတွေအတွက်တော့ စိတ်ပူမိတယ် 😭 ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမကတော့ အားလုံး ကို မေတ္တာထားပါတယ်. ဒီလိုလုပ်တဲ့သူကိုလဲကျမ ဒီကနေမေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်ရှင်. စေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းမယ်ဆိုတာကျမယုံကြည်ပါတယ် ဘယ်အောက်လမ်းနည်းနဲ့ပဲလုပ်လုပ် ကျမရဲ့ သူတပါးပေါ်ထားတဲ့ တကယ့်စေတနာ နဲ့ ရိုးသားမူ ကို စိတ်လုံတဲ့အတွက် ဘာမှ မစိုးရိမ်ပါဘူးရှင် 🙏အများမထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ တာဝန်တွေကို ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေကို အားပေးသူ ပရိသတ်တွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ယခုလို လုပ်ရပ်မျိုးကတော့ သူမရဲ့ ပရဟိတလုပ်ငန်းလေးအတွက် အနှောင့် အယှက်ဖြစ်စေတာကြောင့် ထပ်မံမလုပ်ကြစေဖို့ မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါတယ်နော်။
သူမ ရဲ့ ဂဟောလေး အောကျလမျးနညျး နဲ့ တိုကျခိုကျတာ ခံနရေကွောငျး ဖှငျ့ပွော လာတဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ
ပရဟိတမငျးသမီးလေးလို့ တငျစားရလောကျအောငျ ကိုယျကြိုးမဖကျတဲ့ လုပျငနျးတှမှော စှမျးစှမျးတမံလိုကျလံကူညီတတျသူ မငျးသမီးလေး ခိုငျနှငျးဝဟော အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ရောကျလာတဲ့ ကလေးငယျလေးတှကေိုလညျး သူမရဲ့ ဂဟောလေးမှာ ချေါယူမှေးစားထားတာဖွဈပါတယျ။ သားသမီးလေးတှေ ရဲ့ မိခငျအဖွဈ ပွုစုပြိုးထောငျနတေဲ့ ခိုငျနှငျးဝဟော သူမရဲ့ ဂဟောလေးကို အောကျလမျးနညျးနဲ့ တိုကျခိုကျနသေူတှကွေောငျ့ စိတျမကောငျးဖွဈနရေပါတယျ။
ဒီလိုအတိုကျအခိုကျတှရှေိနကွေောငျးကိုလညျး ကြိုကျမရော ဆရာတျောကွီးထံသှားရောကျဖူးမွျောရငျး သိခဲ့ရတယျလို့ ခိုငျနှငျးဝကေ ဆိုပါတယျ။
မနကေ့ ကြိုကျမရောဆရာတျောကွီး ထံသို့ သှားရောကျဖူး မြှျောရငျး ဂဟော မှာ အတိုကျအခိုကျ အတားအဆီးအနှောကျအယှကျတှေ ရှိနတေယျလို့ ဆရာတျောကွီးက မိနျ့ကွားပွီး ဂဟောကိုလာစဈပေးဖို့ ဒီနပေဲ့ ဆရာတျောကြောငျးက အဘ တယောကျကို ပငျ့ဖိတျပွီးစဈဆေးကွညျ့တော့ အဘက အာရုံပွုကွညျ့လိုကျတာ နဲ့ ဂဟောရှကေ့ ရှကျလှပငျအောကျမှာ ရှိတယျလို့ မိနျ့တော့ ကမြတို့ ခကျြခငျြး ဆယျယူကွညျ့တဲ့အခါ တကယျပဲ အငျးပွားတှေ တှလေို့ကျပါတယျရှငျ အဲဒီအငျးပွားက လူသကေောငျတှမှောပတျတဲ့အဝတျစ.ပိတျဖွူနဲ့လုပျထားတာတဲ့ 😭
ကမြ ကလေးတှအေတှကျတော့ စိတျပူမိတယျ 😭 ဘာပဲဖွဈဖွဈကမြကတော့ အားလုံး ကို မတ်ေတာထားပါတယျ. ဒီလိုလုပျတဲ့သူကိုလဲကမြ ဒီကနမေတ်ေတာပို့လိုကျပါတယျရှငျ. စတေနာကောငျးရငျကံကောငျးမယျဆိုတာကမြယုံကွညျပါတယျ ဘယျအောကျလမျးနညျးနဲ့ပဲလုပျလုပျ ကမြရဲ့ သူတပါးပျေါထားတဲ့ တကယျ့စတေနာ နဲ့ ရိုးသားမူ ကို စိတျလုံတဲ့အတှကျ ဘာမှ မစိုးရိမျပါဘူးရှငျ 🙏အမြားမထမျးဆောငျနိုငျတဲ့ တာဝနျတှကေို ကိုယျကြိုးစှနျ့ပွီး ထမျးဆောငျနတေဲ့ ခိုငျနှငျးဝကေို အားပေးသူ ပရိသတျတှလေညျး အမြားကွီးရှိပါတယျ။ သို့ပမေယျ့ ယခုလို လုပျရပျမြိုးကတော့ သူမရဲ့ ပရဟိတလုပျငနျးလေးအတှကျ အနှောငျ့ အယှကျဖွဈစတောကွောငျ့ ထပျမံမလုပျကွစဖေို့ မတ်ေတာရပျခံ အပျပါတယျနျော။
ပရိသတျ တှေ မသိကွသေးတဲ့ ကလေးဘဝတုနျးက ပွတေီဦးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ အဖွဈအပကျြ တဈခုကို ထုတျပွောပွ လိုကျတဲ့ ငှတေီဦး
အဖွူရောငျ ဖကျရှငျလေး နဲ့ အတှငျးသားလေး ကို မပျေါတပျေါလေး လှဈဟပွသလိုကျတဲ့ မိုးမွငျ့သဇငျ